Cudurka Xashiishada Kanadiyaanka • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Faafidda xashiishadda Kanada
albaabka Ties Inc. 1 May 2022
maqaal by Ties Inc. 1 May 2022
Warbixin dhawaan lagu daabacay New York Times ayaa ku tilmaantay Toronto, magaalada ugu dadka badan Kanada inay tahay galbeedka duurjoogta ah marka laga hadlayo dukaamada xashiishadda.
Inta lagu jiro xilliga korona, saamiyada beeralayda marijuana caafimaad ee la aqoonsan yahay ayaa ku jira Canada, si ay uga farxiyaan maalgashadayaasha, qiimaha kordhay. Si kastaba ha noqotee, ganacsiga marijuana ayaa la filayaa inuu kobco xitaa ka hor inta uusan masiibada bilaabmin sanadka 2019, wax yar uun ka dib markii Raiisel wasaaraha Kanada Justin Trudeau uu soo bandhigay sharci lagu sharciyeynayo isticmaalka madadaalada ee marijuanaada Kanada.
1 Cudurka xashiishka ee Kanada
2 Cawaaqib xumada ka dhalan karta sharciyeynta xashiishada
Cudurka xashiishka ee Kanada
Intii lagu jiray faafitaanka COVID-19, ganacsiga marijuana wuxuu isu beddelay ganacsi kobcaya Kanada, iyadoo dukaamo badan oo badan la furay maalin kasta. Ugu dambeyntii, Oktoobar 17, 2018, dawladda Kanada waxay sharciyeysay xashiishadda isticmaalka madadaalada. Sharciga xashiishka wuxuu abuuraa qaab sharci iyo nidaam lagu xakameynayo wax soo saarka, qaybinta, iibinta iyo haysashada xashiishadda Kanada.
Kanada waa waddankii labaad ee Uruguay ka dib si buuxda u sharciyeeyay marijuana sida wax soo saarka macaamiisha dadaalka loogu jiro ciribtirka ganacsiga dembiilaha iyo ka ilaalinta walaxda gacanta dhalinyarada iyadoo la xakameynayo suuqa. Si kastaba ha ahaatee, korriinka, soo dejinta, dhoofinta ama iibinta marijuana, gaar ahaan kuwa aan qaan-gaarin, ruqsad la'aan ayaa weli loo arkaa dambi culus.
Cawaaqib xumada ka dhalan karta sharciyeynta xashiishada
Dhanka kale, dadka dhaleeceeya sharciga xashiishadda waxay xooga saarayaan saamaynta waxyeelada leh ee bulshada isticmaalka baahsan ee daroogada. Marka isticmaalka xashiishka uu sii kordho, daawadu waxay sidoo kale u yeelan kartaa faa'iido darrooyinka caafimaadka dadweynaha. Xaaladaha qaarkood, xadgudubku wuxuu u horseedi karaa xanuunka matagga wareegga, CFS, xaalad lagu garto matag iyo calool xanuun daran. Kuwa isticmaala xashiishadda ayaa sidoo kale aad ugu dhow inay yeeshaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed.
In kasta oo bakhaaro badan oo Toronto ku yaal ay u xidhmeen masiibada dartii, amar deg-deg ah oo ka yimid dawladda gobolka ayaa u oggolaaday dukaamada marijuana inay furnaadaan. Bishii Maarso 2020, bilihii hore ee masiibada, waxaa jiray 12 dukaan oo xashiishad ah, laakiin hadda waxaa jira 430 dukaan, iyadoo 88 kale ay maraan nidaamka oggolaanshaha.
Markii xukuumadda Raiisel wasaare Justin Trudeau ay sharciyeysay marijuana sanadka 2018, yoolkeeda koowaad wuxuu ahaa in la abuuro nidaam cadaaladeed oo cadaalad ah iyadoo la soo afjarayo "isir naceyb" xirida lahaanshaha. Badinta dukaamada ayaa ah saameyn weyn oo dhinaca xun ah oo leh alaabooyin xun iyo suurtagalnimada xadgudubka sare ee natiijada. Marka loo eego warbixin ay dhawaan dawladdu soo saartay, iibinta marijuana sharci ee Ontario ayaa dhaaftay qiyaasaha iibka aan shatiga lahayn ee saddex sano gudahood, taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha $10,6 bilyan. Sahanka la sameeyay ayaa muujinaya in dad badan oo reer Kanada ah ay isticmaaleen xashiishadda si ka badan sidii hore, boqolkiiba 25 dadka ay da'doodu ka weyn tahay 16 sano.
Akhri presstv.ir (Source, EN)
Saliida CBD ma xoojisaa timahaaga?
Thailand waxay ku siinaysaa hal milyan oo dhir xashiishad ah bilaash…
Sharci cusub ayaa fududeynaya gelitaanka bangiyada...